Umusi. Iyini, yakhiwa kanjani futhi inemiphi imiphumela yempilo? Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kulula kwezinye izehlakalo zesimo sezulu ukudideka komunye nomunye ngenxa yokufana nezimpawu abanazo komunye nomunye. Isibonelo, inkungu ivame ukudideka nenkungu, inkungu, kanye umusi. Namuhla sizokhuluma ngokuthi yini i-haze, ukuthi yakha kanjani nokuthi inomthelela muni ezimpilweni zethu.
Uma ufuna ukwazi kabanzi nge-haze futhi ufunde ukuyihlukanisa nezinye izinto ezifanayo, lokhu okuthunyelwe kwakho.
1 Yini i-haze
2 Umehluko phakathi kwe-haze nezinye izinto
3 Izinhlobo ze-haze
4 Izimo zezempilo
IHaze yinto yesimo sezulu eyenzeka emkhathini. Isici sayo esikhulu ukuthi inenqwaba yothuli nezinhlayiya zesihlabathi. Ngakho-ke, futhi kunciphisa ukubonakala njengoba kwenza inkungu. Ekumisweni singathola umlotha nobumba ngisho. Ukuhlungwa okuphezulu kwalezi zinhlayiya kunciphisa ukubonakala, kepha futhi kungadala okunye ukulimala kubantu inkungu engakwenzi.
Imvelo enamafu eyenziwe yi-haze ingaba yingozi kubantu abahamba ngezinyawo ngenkathi lo mkhuba usenzeka nakubashayeli.
Umehluko phakathi kwe-haze nezinye izinto
Sizokhuluma ngezimo eziyinhloko ezifana ne-haze futhi ezivame ukudideka nobuningi obuphezulu. Isimo sokuqala yinkungu. Inkungu yenzeka ngokuncipha kwezinhlayiya zamanzi emvelweni ngenxa yamazinga okushisa aphansi. Ukwakhiwa kwamafu ngokoqobo ezingeni lomhlaba kungadala imithelela ehlukahlukene ekushayeleni ngenxa yokubonakala okunciphile. Noma kunjalo, Akubangeli mthelela empilweni uma uhamba ngenkungu. Kalula nje, umswakama osemvelweni uphakeme.
Okufanayo kuya ku-haze. Lesi simo asiyona nje inkungu enamaphesenti wokugcwaliswa kwamanzi futhi evame ukuba nayo ezindaweni ezisogwini. Esimweni esinjalo, ingozi igxile kakhulu ekushayeleni ogwini nasezindaweni ezizungezile noma kunalokho ogwini ekuzulazuleni. Futhi, asitholanga miphumela engemihle empilweni yabantu abahamba ngendlela enenkungu.
Umehluko phakathi komusi nezinye izinto ovame ukudideka ngazo kungenxa yokwakheka kwezinhlayiya ezinciphisa ukubonakala. Ngenkathi kusenkungwini nasenkungwini ziyizinhlayiya zamanzi ezijiyile ezakha amafu, emafwini ziyizinhlayiya zothuli, isihlabathi, umlotha kanye nobumba.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene ze-haze kuya ngokwakhiwa nezici. Sinokulandelayo:
Thayipha u-A. Luhlobo lwenkungu "yemvelo", ngomqondo ongokomfanekiso, eyakhiwa ngothuli, isihlabathi nosawoti emvelweni. Imvamisa, uma inani losawoti emanzini liphakeme, sisendaweni engasogwini futhi kunomoya, kungahle kube khona umusi. Le haze yakhiwa kusuka ekuthuthweni kwesihlabathi, uthuli nosawoti okusemanzini kuya ngaphakathi kwedolobha. Ukuhlungwa kwalezi zinhlayiya emoyeni kunciphisa ukubonakala futhi kungaba yingozi empilweni yakho ukuphefumula izinhlayiya eziningi kangaka emoyeni ngendlela eqhubekayo.
Thayipha B. Lokhu yilokho okwakhiwa kwezinye iziqephu ezithile ezithile. Kungenzeka lapho ukungcola emadolobheni kuphakeme ngenxa yokuzinza komkhathi nokungabikho komoya. Kulokhu, ukukhishwa kwegesi okuvela emapayipini e-exhaust asepayipini kugcinwa ezindaweni zasemadolobheni, kubangele inkungu yangempela yokungcola. Umusi ungabuye uvele ngentuthu evela emlilweni wehlathi. Ukuphefumula kwalezi zinhlayiya kuyingozi kakhulu empilweni kunohlobo A.
ESpain, inkungu ivame kakhulu ebusika. Ngaphezu kwakho konke, simthola engena iziQhingi zaseCanary, ikakhulukazi eLanzarote naseFuerteventura. Lesi simo senzeka ngenxa yezikhombisi-ndlela lapho umoya uvunguza khona. Lapho ishaya ngasentshonalanga, ithwala lonke uthuli olusuka ogwadule lwaseSahara luyiyise eziqhingini, okwenza ukuba ukubonakala kwehliswe kakhulu futhi kube yingozi ukuphefumula. Ngaphezu kwalokho, izimoto zibonakala zigcwele udaka.
Siphatha yonke i-athikili esho ukuthi ayinayo impilo. Kodwa kungani?. Imiphumela ye-haze inezinto ezimbili. Eyokuqala iqondile kanti enye ayiqondile. Ingxenye engaqondile inciphise ukubonakala. Lokhu kungadala izingozi zomgwaqo nezinye izinkinga ezisuselwa ebunzimeni bokubona okungale kwalokho. Ukunciphisa ukubonakala akuthinti umzimba, kepha imiphumela engalethwa yilokhu.
Ngakolunye uhlangothi, sinemiphumela kanye nemiphumela eqondile. Ukuxinana okuphezulu kothuli nezinye izinhlayiya kwenza kube nzima ukuphefumula nokucasula ulwelwesi lwamafinyila. Omunye wemiphumela emikhulu ukuvinjelwa kwamakhala, amehlo alumayo nokukhwehlela okuqhubekayo. Uma i-haze inesibalo esikhulu kakhulu, kungenzeka ukuthi, noma ezinsukwini ezimbalwa, izinkinga ze-bronchospasm zingavela. Lokhu, inkinga enkulu yokuphefumula, i-asthma, nobuhlungu besifuba. Kwabanye abantu futhi kuveza inkinga yokukhathazeka.
Ukuqeda imiphumela yezempilo ye-haze, kubalulekile ukulandela izibikezelo zezulu futhi ubike ukuvela kwalesi simo. Amanye amathiphu adingekayo ongawalandela lapho kune-haze ukuvala iminyango namawindi, uphume endlini kancane ngangokunokwenzeka, usebenzise imaski yokuphefumula, gwema ukuzivocavoca emoyeni ovulekile, uphuze uketshezi oluningi ukuze ugweme ukungena emanzini, njll.
Noma yikuphi ukuqaphela kuncane. Mhlawumbe ukuqapha okubaluleke kakhulu ukungaphumi endlini inqobo nje uma kungabalulekile. Ngale ndlela siqinisekisa ukuthi akukho nezinhlayiya ezisemvelweni ezizophefumulwa.
Ngokuvamile umusi uhlehla lapho kuba noshintsho ezinxenyeni zomoya, lapho kubhekiswa khona umoya noma umcimbi othile wemvula. Noma yikuphi ukunyakaza okusabalalisa izinhlayiya kuzosiza ekuqedeni i-haze nemiphumela yayo emibi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungazi kangcono ngalesi simo sezulu kanye nomehluko waso omkhulu ngenkungu nenkungu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » UCalima
karen Rodriguez kusho
Sanibonani, lapha edolobheni lami izimoto ezingezona izimoto azisahambi njengakuqala, awekho amachibi kepha kube khona inkungu enkulu, akusiyo inkungu noma inkungu, futhi lina kodwa liyaqhubeka nokubumba futhi akukho moya
Phendula ku-karen rodriguez
UCarmen Hernandez kusho
Ukusuka eLos Teques, eVenezuela, ngivalelwe wedwa ekuthuleni komndeni, ikhaya lami. Ngikuthole kuyindatshana enhle kakhulu engivumele ukuthi ngihlukanise i-haze, inkungu nenkungu, imiqondo yayo ebengingacacisanga kahle ngayo. Ngincoma le ndatshana ngoba ngamagama alula bayichazile. Ngiyayincoma.
Phendula uCarmen Hernández
Idolobha eliphakeme kunazo zonke eSpain